Nhau - Chii chinonzi Zuva Kudzivirira Zvipfeko? Chii chinonzi UPF Kurapa?
Yekutanga t shirt
Chii chinonzi Kudzivirirwa Nezuva? Chii chinonzi UPF Kurapa?
Kana iwe uri unoshingairira beachgoer, surfer kana wemvura mwana, mikana iwe wakanyunyuta pamusoro pekufanirwa kukwidza pamusoro pegirazi rezuva nguva dzese paunotendeuka. Mushure mezvose, zvinokurudzirwa kunyorera zvekare sunscreen maawa ese maviri kana zvakadaro - kunyanya kana iwe uchisendeka kure, kushambira kana kudikitira kazhinji. Uye kunyangwe izvi zvisinga gadzirise matambudziko ako ese - nekuti zvinokurudzirwa kuti zvishandiswe mukufambidzana nescreen yezuva - tinogona kukuzivisa iwe zvipfeko zvekuchengetedza zuva?
Huh? Zvakasiyana papi nedzembatya dzekare, iwe unobvunza?
Zvakanaka kune vanotanga, dermatologist, Alok Vij, MD, anoti kana vachitaura nezvemachira vanoshandisa izwi rekuti "UPF," iro rinomiririra ultraviolet protection factor. Uye neiri sunscreen, shandisa izwi rekuti "SPF," kana iro rinozivikanwa zuva kudzivirira chinhu. "Shirts zhinji dzedonje dzinokupa yakaenzana ne UPF ye5 kana uchinge wakapfeka," anotsanangura kudaro.
“Micheka mizhinji yatinopfeka ndeyekuruka yakasununguka inoita kuti mwenje unooneka utarike ugosvika paganda redu. Iine mbatya dzinodzivirirwa ne UPF, kuruka kwakasiyana uye kazhinji nguva inogadzirwa kubva kumucheka wakakosha kubatsira kugadzira chinovharidzira mwaranzi yezuva. ”
UV mwenje unokwanisa kupinda nemumaburi madiki ari mumachira ezvipfeko zvakajairwa kana kutogona kufamba chaiko kuburikidza neshati yakajeka Uine UPF zvipfeko, iro bhuru rakanyanya kukura, richikupa kudzivirirwa kubva kuzuva. Ehezve, zvipfeko neUFF zvinongodzivirira nzvimbo dzemuviri wako dzakafukidzwa nejira rakarapwa.
Mazuva mazhinji zvipfeko zvekudzivirira zuva zvinotaridzika uye zvinonzwa kunge zvinoshongedzwa kupfeka kana zvemitambo uye zvinouya mumhando dzakasiyana dzehembe, leggings uye ngowani. Uye nekuda kweiyo yepamusoro tambo kuverenga, inowanzo kunzwa zvishoma zvishoma zveumbozha vs. yako yakajairwa T-shati.
Post nguva: Jan-20-2021
Fangda Shang Shang Kuvaka, No. 888, Chuangxin yekutanga Road, Gaoxin Area, Qinshanhu District, Nanchang, Jiangxi, China
Tsika Marathon Zvigadzirwa Uye Zvishongedzo
Kana zvasvika pakuedza kwekuyedza uye zviitiko, marathons ari pakati pesarudzo dzakakurumbira kunze uko. Marathon inobvumira vamhanyi kuti varatidze simba ravo, kugona kwavo uye kuzvipira kwavo ...
Chii chinonzi Kudzivirirwa Nezuva? Wh ...
Kana iwe uri unoshingairira beachgoer, surfer kana wemvura mwana, mikana iwe wakanyunyuta pamusoro pekufanirwa kukwidza pamusoro pegirazi rezuva nguva dzese paunotendeuka. Mushure mezvose, zvinokurudzirwa kuti rea ...
Chii chinonzi triblend jira? Nei iri v ...
Nei iyo triblend t shirt iri yakanaka kupisa? Kana mutengi wangu achitsvaga rairo yekusarudza zvinhu zvekuita t shirt yenguva dzose, ndine chokwadi chekuzvikurudzira. Kana iwe ukandibvunza chikonzero, ini ndaikuudza kuti tr ...